မိုးခေါင်ရေရှားဒေသမှ အော်သံများ: 2013
လူဆိုးတွေ တစ်ယောက်မှ မသေသေးဘူးလား
လူကောင်းတွေမှာ ဒုက္ခများလှပါပြီကွယ် "
ကဗျာဆရာလှသန်းကတော့ အဲဒီလို ညည်းခဲ့လေရဲ့
စိတ်ပျက်ဖွယ် အီစီကလီကြောင်စီကွေး ဒီမိုကရေစီ ချန်ထားခဲ့
စိတ်ပျက်ဖွယ် အာဝါးဒါး ပြက္ခဒိန်အဟောင်းများ ချန်ထားခဲ့
ငါတို့မှာတော့ ဆဲတုန်းဆိုတုန်း အိပ်မက်ပြိုသံတွေတ၀ုန်းဝုန်းနဲ့ပေါ့
ဒါမှမဟုတ် ပေါက်လွှတ်ပဲစားစကားလုံးတွေများတဲ့ဝါကျကို ခြစ်ထုတ်ပစ်လိုက်သလိုပေါ့
စိတ်ပျက်ဖွယ်နှစ်တစ်နှစ်အား ချန်ထားခဲ့ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:46 PM 1 comment: Links to this post
ဟေ့ ကိုယ်လူ့ ..... ခင်ဗျား ပါးစပ်ပေါက်ကြီးကို ပလာစတာနဲ့ ကပ်ထားလိုက် (ဒါမှမဟုတ်) ရေသန့်သန့်နဲ့ ပလုတ်သွားကျင်းလိုက် !
လူငယ်ဆိုတော့ ဇောင်းထ ဇောင်းကြွသတဲ့
လူငယ်ဆိုတော့ ဖောင်းထ ဖုထစ် ပျိုမြစ်ပေမယ့် ညိုညစ်တဲ့အတွေးတွေသာရှိသတဲ့
ဟေ့ လူ .. ခင်ဗျား ပါးစပ် ခင်ဗျားဖြတ်သာရိုက်ပစ်
ဟုတ်ပါတယ် ဇောင်းထပါတယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ဇောင်းမကြွခဲ့ပါ
ဖောင်းထ ဖုထစ် ပျိုမြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မညိုညစ်ခဲ့ပါ
ခေတ်ကို ဂိုးသွင်းဖို့ (ဒါမှမဟုတ်) အမှန်တရားကို ဂိုးသွင်းဖို့သာ ပြင်ထားတယ်
ကျနော်တို့ လူငယ်နေ့စွဲတွေဟာ သောက်လိုက်စားလိုက် ပျော်လိုက်ပါးလိုက်နဲ့
ကျနော်တို့ လူငယ်နေ့စွဲတွေဟာ ဆဲလိုက် ဆိုလိုက် အော်လိုက်ဟစ်လိုက်နဲ့
ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မရိုင်းစိုင်းခဲ့တာ အသေအချာ
အမှန်တရားဟာ သိပ်ခါးနေရင်တော့ ခင်ဗျားလျှာပေါ်ကထွေးထုတ်ပစ်လိုက်
ဒီမှာ ... ဒီမှာ
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဝါဒနဲ့ကိုယ် လေကိုရှူသွင်းခဲ့ကြ
ဒါပေမယ့် ဓားကိုတော့ အဓမ္မကိုဖီဆန်ဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးသွေးခဲ့ကြ
ဘယ်တော့မှဖွင့် လို့မရတဲ့သော့နဲ့သာ ခတ်ထားလိုက်
ရှေ့က ခြေနဲ့ရေးတဲ့အမှားတွေကို လက်နဲ့ဖျက်မလို့
ရှေ့က မရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးတွေကို ဇွဲနဲ့ဆက်လျှောက်ဖို့
ရှေ့က မဆုံးသေးတဲ့ သီချင်းတွေကို ရင်ကိုဖွင့်ပြီးဆိုမလို့
ရှေ့က မှောက်ခဲ့တဲ့ သဘောင်္ကို ရွက်ဆက်လွှင့်ဖို့
ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ် ... စစ်ပွဲတွေမှာ သေပေးလိုက်ရတာ လူငယ်တွေချည်း
လူကြီးတွေ အပျော်သက်သက် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့အတွက်
ကျနော်တို့ လူငယ်တွေသာ မြေဇာမြက်တွေ
ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်.... ခေတ်ရဲ့အလေအလွင့်တွေ ကြားမှာ
လူကြီးတွေ နှမြောဖို့ ၀မ်းနည်းဖို့သက်သက် အစတေးခံသားကောင်တွေ
ငယ်ပေမယ့် ဘယ်တော့မှ လူလည်မကျခဲ့
ကျနော်တို့ဟာ လူငယ် ....ဒါပေမယ့် သမိုင်းကိုဝယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြ
ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ် အနာဂတ်ကို သစ္စာမဖောက်ခဲ့ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:28 PM No comments: Links to this post
အခု ငါတို့ဟာ ရေခဲရိုက်ထားတဲ့ အပုပ်အသိုး ဒီ...ဒီ...ဒီ... အခန်းထဲမှာ
ဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာ ဘယ်တော့မှ အလေ့ကျမပေါက်ဘူး
သူရဲကောင်းတွေရဲ့ နာမည်ကို ဖြစ်ဖြစ်
[ယာဘက်လက်နဲ့ ဆန်ရေစပါး ( အစားအသောက်) ကို ပြည်သူတွေကိုပေးလို့
ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ အ၀တ်အထည် ကို စွန့်ကြဲ သတဲ့ ]
ငယ်ငယ်က ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ကျန်စစ်သားရဲ့သမိုင်းထဲမှာအဲသလို သိခဲ့ရတယ် ။
အဲသလိုဆို အခု ငါတို့ဟာ
ဘယ်ဘက်လက်ကိုဖြတ်ပြီး ညာဘက်လက်ကို ၀ှက်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာပေါ့
အခု ငါတို့ဟာ လူတောမတိုးတဲ့ခွေးဝဲစားတွေပါ
အခု ငါတို့ဟာ ညစ်ထေးထေးသူတောင်းစားတွေပါ
အခု ငါတို့ဟာ မြှားချက်တွေကိုရှောင်တိမ်းနေရတဲ့ယုန်သူငယ်လေးတွေပါ
အခု ငါတို့ဟာ တစ်နေ့လုပ်အားခ တစ်နေ့စားနေရ သာမန်အခွန်ထမ်းပြည်သူတွေပါ
အခု ငါတို့ဟာ ပေတိပေစုတ် ကျွတ်စပွတ်လေးတွေပါ
အခု ငါတို့ဟာ အော်ချင်ရာအော်ဖို့ ပါးစပ်ပေါက်ပျောက်နေကြသူတွေပါ
အခု ငါတို့ဟာ ပုံပြင်အဟောင်းကို Version ပြောင်းပြောခြင်းကိုခံကြရသူတွေပါ
"တရားမမျှတမှုဟာ ဥပဒေဖြစ်လာတဲ့အခါ တော်လှန်ပုန်ကန်မှုဟာ လူထုတာဝန်ဖြစ်တယ်။" ( သောမတ်ဂျက်ဖာဆင် )
နှစ်တွေ ၊ နှစ်တွေဟာ သူတို့ ချဉ်ခြင်းတက်ရာကို တောင်းဆိုလို့
နှင်းတွေ ရွှဲရွှဲစိုနေမယ့်နှစ်တွေကို မျှော်လင့်နေရ
တကယ်တော့ ငါတို့ဟာ ဓားစာခံတွေပေါ့
ဘာမီးမှ မတောက်ခဲ့တာတော့ အသေအချာပေါ့ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:11 PM No comments: Links to this post
ညနေခင်းလေးဟာ ခပ်ဟဟ ရယ်မောနေတတ်ခဲ့ပါတယ်
ရင်အုံကို ခွဲကြည့်ရင် ဒဏ်ရာတွေဒလဟောထွက်ကျလာပါလိမ့်မယ်
ရင်အုံကို ခွဲကြည့်ရင် နှစ်ယောက်စီးခဲ့တဲ့စက်ဘီးလေးတစ်ဘီးရှိနေပါလိမ့်မယ်
အမှန်တရားတွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာမှားတတ်ကြောင်း ညနေခင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါသေးတယ်
ညနေခင်းဟာ နှုတ်ခမ်းကို ခပ်တင်းတင်းကိုက်ထားတယ်
ညနေခင်းဟာ အချစ်ကြောင်းကို မေ့ပစ်ချင်တဲ့ဟန်ပန်နဲ့ပေါ့
ညနေခင်းလေးမှာ ကိုယ်ဟာ ဖယိုဖရဲကျဆုံးခဲ့ပါတယ်
(၁၄ . ၁၂ . ၂၀၁၃ )
Posted by မောင်ရေချမ်း at 4:57 AM 1 comment: Links to this post
အင်္ကျီတစ်ထည်မှာ အိတ်ကပ်ဟာ အရေးပါတာပေါ့
အိတ်ကပ်ထဲမှာ လိုလိုမယ်မယ် ရှူဆေးဗူးဆောင်ထားလို့ရတယ်
အိတ်ကပ်ထဲမှာ မနက်ခင်းမွှေးမွှေးလေးတွေ ရောက်နေတတ်တယ်
အိတ်ကပ်ထဲမှာ ညနေပုပ်အက်အက်တွေ ရှိနေပြန်ရော
အိတ်ကပ်ထဲမှာ ခြင်္သေ့တွေ ခုန်ဝင်နေတဲ့အခါ ပျော်စရာပေါ့
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ... လူငယ်ဘ၀ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာ
ခုတော့ အိတ်ကပ်ဟာ ပေါက်ပြဲလို့
ပိုက်ဆံမရှိတဲ့အခါ အိတ်ကပ်ဟာ စိတ်ပျက်စရာပါ။ ။
2014 - ဇန်န၀ါရီလ ၊သရဖူ Magazine
ငါတို့အားလုံးဟာ ကိုယ့်ဒဏ်ရာကိုယ် ဇစ်တပ်ထားကြတာ
အရက်သမားတစ်ယောက် အော်ဆိုလိုက်တဲ့ သီချင်းသံပမာ
ငါတို့ဟာ သစ်ရွက်ကလေးတွေကြွေကျနေသလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေထိုင်ကြတယ်
လေးနက်စွာ ကမ္ဘာကြီးထဲကို ချောင်းကြည့်ခဲ့ကြ
ငါတို့ထဲက တချို့ဟာ စိတ်မထင်တဲ့အခါ
ကမ္ဘာထဲကို ကဗျာတွေ သွန်ကြဲချဖို့ လာခဲ့ကြပေါ့
ပြီးရင် .. အလင်းကို ရသလောက် ကဲ့ယူရင်း
ငါတို့နာမည်နဲ့ရုပ်ထုတွေ ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ ထုဆစ်ခဲ့မလို့
ပြီးရင် ...Sound Box တွေကို ရိုက်ခွဲ
အားလုံးဟာ ကိုယ့်အသံနဲ့ကိုယ် သီချင်းဆိုမလို့
မှောင်နေတဲ့ ညတွေအတွက် လကို ဖဲ့ဖဲ့ချမလို့ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:46 PM No comments: Links to this post
ပြောရရင်တော့ မြေခွေးမြို့တော်မှာ မြေခွေးတွေနေတဲ့အကြောင်းကပဲစရမယ်
ဒါပေမယ့် အဲဒါဟာ ထူးဆန်းတာမှမဟုတ်တာ
မြေခွေးမြို့တော်က မြေခွေးတွေက သူတော်ကောင်းမြေခွေးတွေပေါ့
ပြီးတော့ အခါကြီးရက်ကြီးများဆို ဥပုလ်သီလတောင်ဆောက်တည်ကြသတဲ့လေ
မြေခွေးမြို့တော်က တချို့မြေခွေးတွေဟာ ယုန်သူငယ်မျက်နှာလေးတွေနဲ့တဲ့လေ
တချို့မြေခွေးတွေက မကြာခဏဆိုသလိုပဲ မြေခွေးမြို့တော်တိုးတက်ရေးအတွက်အစည်းအဝေးတွေလုပ်ကြ
တချို့မြေခွေးတွေက အဲဒီ့အစည်းအဝေးခန်းမထဲမှာပဲ အိပ်ငိုက်ကြပြန်ရော
မြို့တော်ရဲ့ ရှိရှိသမျှ နံရံမှာ သူတို့လက်သည်းတွေနဲ့ခြစ်ပြီးစာတွေရေးကြတယ်
မြို့တော်ရဲ့ရှိရှိသမျှ အသံလွှင့်ရုံတွေထဲကနေ သူတို့ရဲ့အော်သံတွေကို လွှင့်ကြတယ်
ပြီးတော့ မေတ္တာတရားအကြောင်းကို တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်ပြောဆိုကြပါသတဲ့
အဘိုးအိုတစ်ယောက်က ပြောပြနေတာကို ခွက်ထိုးခွက်လန်ရယ်ရတာ ပိုပြီးထူးဆန်းလွန်းပါတယ်။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:42 PM No comments: Links to this post
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို သိမ်းဆည်းပြီး ခပ်၀၀ရှိလွန်းခဲ့ပါတယ်
အမှားလက္ခဏာဘယ်လောက် ၊ အမှန်လက္ခဏာဘယ်လောက်
Tatannic ဇာတ်ကားထဲက လီယိုနာဒိုလို တံတွေးကို ကိုယ်နဲ့အဝေးဆုံးရောက်အောင်ထွေးပစ်ခဲ့
တရားမျှတမှုကိုလည်း နိုင်ငံတော်အလံပမာသဘောထား ဦးညွှတ်ခဲ့ပါတယ်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ခပ်ဖွဖွလေးနမ်းမွှေးခဲ့ပါတယ်။ ။
ရုပ်ရှင်တေးကဗျာမဂ္ဂဇင်း၊ဖေဖော်ဝါရီ ၊ ၂၀၁၄
Posted by မောင်ရေချမ်း at 6:27 AM 1 comment: Links to this post
Posted by မောင်ရေချမ်း at 8:45 PM 1 comment: Links to this post
ကောင်းကင်ဟာ ကြယ်ပုပ်ကြယ်သိုးတွေနဲ့ ညိုမွဲစွာ
အလင်းတစ်ပွင့် ၊ နှစ်ပွင့် ပွင့်ဖို့အတွက်
ဒဏ်ရာဆိုတာ ဘ၀လုံးစာဈေးကြီးလွန်းခဲ့ပါတယ် ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 8:34 PM No comments: Links to this post
ခေါင်းပေါင်းစကို သပ်ချလိုက်ပုံက တိုက်ဂါးဝုဒ်အင်္ကျီကို ပင့်တင်လိုက်သလိုပေါ့
ဟန်ပန် ဒီဇိုင်းကတော့ အမေရိကန်ဂေါက်အကျော်အမော် ဖီးလ်မိုက်ကယ်ဆင်လိုလို
ပြီးတော့ ဘာလိုလို ညာလိုလိုပေါ့
ဂေါက်သီးကို ချိန်ဆနေပြန်တော့ ကမ္ဘာကြီးကို ချိန်ဆနေတဲ့အထာနဲ့လေ
ရေရေလည်လည် လန်းပြီး ပိုးစိုးပက်စက် ဂေါ်တယ်
တစ်နေကုန် မနေမနား ကြိုးစားပမ်းစား ကစားခဲ့တာ
ဂေါက်သီးဟာ ကျင်းဝင်ဖို့မပြောနဲ့ ကျင်းနှုတ်ခမ်းဝကိုတောင် မနမ်းခဲ့ရရှာ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 8:52 PM No comments: Links to this post
ကြယ်တွေ ... ကြယ်တွေ .. ၊ သူတို့ဟာ သတ္တိရှိတဲ့ကြယ်တွေ !
သတ္တိရှိတဲ့ကြယ်တွေဆိုတာ သူတို့ရင်ထဲကအသံကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပဲအော်တတ်တယ်
ကောင်းကင်မှာ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ဖြန့်ကြဲစိုက်ပျိုးထားတာ
သတ္တိရှိတဲ့ ကြယ်တွေအတွက် အားပေးနေတဲ့လက်ခုပ်သံတွေရှိတယ်
သတ္တိရှိတဲ့ ကြယ်တွေဟာ မကြောက်တရားတွေအပြည့်နဲ့
သတ္တိရှိတဲ့ ကြယ်တွေဟာ လက်သီးမဆုပ်ဘူး ၊ လက်နက်မကိုင်ဘူး
သတ္တိရှိတဲ့ ကြယ်တွေဟာ အကြမ်းမဖက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့
သတ္တိရှိတဲ့ ကြယ်တွေဟာ ကောင်းကင်ကိုထုဆစ်လင်းတောက်ကြဦးမှာ
သတ္တိရှိတဲ့ ကြယ်တွေကို ချုပ်နှောင်ထားသော်လည်း
အလင်းဟာ ပိုပိုချွန်မြလာ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:21 PM No comments: Links to this post
ကိုယ့်ကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ခပ်ခပ်သောက်သွားတဲ့ သောကြာတွေ !
သောကြာရောက်ပြီဆို ကိုယ်ဟာ လေလေးတချွန်ချွန်နဲ့ပေါ့
တစ်ခါတလေများ အစအဆုံးမရတဲ့ သီချင်းလေးများတောင် ဆိုလို့လေ
သောကြာဟာ ဘာလို့ အရမ်းချစ်ဖွယ်ကောင်းလွန်းခဲ့လဲ ကိုယ်တကယ်မသိခဲ့ဘူး
သောကြာဟာ ဆံပင်အရှည်ထားရင် ဒေါတင်းတတ်သေးတယ် ၊ မကြာခဏဆံပင်ညှပ်ဖို့ပြောတတ်ရဲ့
ဆိတ်ဆွဲတတ်တဲ့ လက်သည်းချွန်ချွန်လေးတွေနဲ့ သောကြာပေါ့
စိတ်မရှည်ရင် မျက်စောင်းနုနုလေးတွေ လှစ်ခနဲပေးတတ်တဲ့သောကြာပေါ့
ဆံနွယ်တွေကို စည်းနှောင်မထားတဲ့အခါ ကပိုကယိုအလှတွေနဲ့သောကြာပေါ့
အဲဒီ့သောကြာပေါ့ ... ကိုယ့်အိပ်မက်တွေကို ခပ်ခပ်သောက်သွားတာ
သောကြာဟာ တစ်ခါတစ်ခါ အဖြူရောင်အင်္ကျီမှာ စီးကွန့်လှလှလေးတွေနဲ့
သောကြာဟာ တစ်ခါတစ်ခါ ခေါင်းလျှော်ပြီးစ သင်းပျံ့ပျံ့မွှေးရနံ့လေးနဲ့
သောကြာကို သိပ်ချစ်တာပဲလို့ ကိုယ်ဟာ စာရွက်တွေပေါ်မှာ မကြာခဏရေးနေမိတယ်
တကယ်ပါပဲ .. အဲဒီ့သောကြာပေါ့
ကိုယ့်အိပ်မက်တွေကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ခပ်ခပ်သောက်နေတာလေ
သောကြာမှာ ပါးပြင်နုနုလေးကို မွှေးတဲ့အခါ ရှက်ဝါးဝါးလေးပြုံးတယ်
သောကြာမှာ လက်ချောင်းလှလှလေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်တဲ့အခါ ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲပြန်ရုန်းတယ်
သောကြာမှာ ချစ်တယ် ပြောတဲ့အခါ ခေါင်းငုံ့ပြီး စူပုတ်နေတတ်သေးတယ်
သိပ်ကို ဣနြေ္ဒကြီးလှတဲ့ သောကြာပေါ့
သောကြာဟာ အလှူအိမ်မှာ ဖိနပ်ပျောက်သလို တစ်ခါတစ်ခါတော့ခံရခက်လှတယ်
စာအုပ်တစ်အုပ်ကို နှစ်ယောက်အတူ လုဖတ်ရင်း
သောကြာဟာ သောကြာသိပ်ပီသလွန်းခဲ့ပါတယ်။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:47 PM No comments: Links to this post
နံရံကို ပြေးပြေးဆောင့်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ လူငယ်ညနေတွေ !
တတ်နိုင်သမျှ အဆုတ်ထဲရှူသွင်းမိတော့ ချောင်းဆိုး၊ရင်ကျပ်ဖြစ်ရ ခဏခဏ
ငါတို့ဟာ ပေါက်လွှတ်ပဲစား အော်ကြောလန်ကောင်စားတွေပေါ့
ငါတို့ဟာ လူငယ်တွေပီပီ အလန်းဇယားဆိုလည်း အလန်းဇယားမှ
အကြမ်းစားဆိုလည်း အကြမ်းစားမှ ကြိုက်တယ်
ခိခိ ခွိခွိ အသံတိတ်ကြိတ်ရယ်ရတဲ့ ဟာသစုတ်စုတ်တွေ သိပ်စိတ်နာစရာပဲ
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ ရော့(ခ်)သီချင်းကြမ်းကြမ်းတွေကို ခုန်ပေါက်ဆို
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ သတင်းစာတွေ စိတ်ပျက်လက်ပျက် လှန်လှောဖတ်
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ ရိုးသားသမျှကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပစ်ချင်လာတယ်
တကယ်တော့ ဘ၀ဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်ခဲ့ပါ
လူယုတ်မာတွေများတဲ့ကမ္ဘာထဲ ပျော်သလို နေတတ်ခဲ့ပြီပဲ
ငါတို့ဟာ ရေကြမ်းလေကြမ်းအောက်မှာ ဗရမ်းဗတာစီးချင်သလိုစီးနေကြတဲ့
စမ်းချောင်း အပွန်းအပဲ့ လှလှလေးတွေ
အနီရောင် အစင်းကြောင်းတွေနဲ့ လူငယ်နေ့စွဲတွေ
ကောင်းကင်ကို ထိုးခွဲဖို့ ဆံပင်တွေကို မိုးအထိအောင်ထောင်ထားတဲ့ကောင်စားတွေလေ
တ၀ီဝီမြည်နေတဲ့ ထိလွယ်ရှလွယ် နာကျင်အရည်ပြားပေါ်မှာ ယုံကြည်ရာကိုတက်တူးထိုးခဲ့ကြ
ပုပ်ပွနေတဲ့ ငါးတစ်ကောင်ကို ကင်စားနေရသလိုပါပဲ
ငါတို့လူငယ်ဘ၀တွေ တဖြည်းဖြည်း အိုမင်းရင့်ရော်လာ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:42 PM No comments: Links to this post
ငါတို့ဟာ ပေါက်လွှတ်ပဲစား ယုံလွယ်သူဈေးသည်တွေပါ
နောက်ဆုံး ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ဈေးဗန်းထဲထည့်ရောင်းခဲ့ကြပေါ့
ဒီကမ္ဘာမှာ ရင်းသလောက် ပြန်မမြတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 6:44 AM No comments: Links to this post
ငါတို့ဟာ လူငယ် ၊ ပြီးတော့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ကြယ်တွေ !
လူငယ်တွေဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ငန်တယ်
ဓားဆိုလည်း ဓား ၊
ခေတ်နဲ့ ဓာတ်မတည့်ဘူးဆိုပေမယ့် ဆွဲစရာရှိဆွဲသလို ရဲစရာရှိရင်လည်းရဲခဲ့ကြတယ်
ထစ် နေတဲ့စီဒီဆိုရင် ကျော်ကိုမကြည့်ချင်
စက်ထဲကနေ ဗြုတ်ခနဲဆွဲထုတ် ဖြောင်းခနဲနေအောင်ထိုးခွဲပစ်ချင်ကြသူတွေ
စိတ်မလိုရင် မိုးရေတွေကိုတောင် ကျိုးကြေသွားအောင် ချိုးချေပစ်ကြသူတွေ
ကောင်းကင်ကိုလည်း အင်္ကျီအသစ်နဲ့ လှစေချင်သူတွေလေ
တက်ကြွခဲ့ကြပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်တုန်းကမှတော့ စောင်းမထခဲ့
ငါတို့ရှေ့က ဂုဏ်ပြုအပ်တဲ့ကြယ်တွေကို တခုတ်တရဦးညွှတ်ခဲ့သလို
ဘာဘာညာညာ ကလေးအထာနဲ့လူကြီးတွေဆိုရင် တောက် ချပစ်ချင်
ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဂီတာကိုယ်တီး ၊ ကိုယ့်သီချင်းကိုယ်ဆိုပြီးပျော်ခဲ့ကြပေါ့
ခုနစ်အသေတွေကို ဆွဲဖွင့်လို့ ကမ္ဘာကြီးထဲရွက်လွင့်ဖို့ ငါတို့ လာခဲ့ကြပါတယ်
ပြီးရင် ကြယ်တွေပေါ်မှာ ငါတို့နာမည် အသန့်ရှင်းဆုံးထုထွင်းစိုက်ပျိုး ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:22 PM No comments: Links to this post
စီးကရက်ကိုခဲပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဟန်ပါပါနဲ့ခါးထောက်ကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်
မနက်မနက်ဆို အပျင်းပြေစစ်ပွဲကို အပျော်တမ်းကစားလုိ့
ည ည ဆို ကြယ်တွေကို ဗန်ဒါသီးထုသလို ထု အတွင်းသားကိုဖြဲလို့
ထင်ပေါ်သူ တစ်ယောက်မှ မရှိပါ
ခေတ်ပေါ် ဆန္ဒပြမှုတွေ မရှိပါ
မနက်ခင်းဆို ကပိုကယိုထပြီး သတင်းစာဖတ်တယ်
ဟိုအမှောင် ဒီအမှောင်ထဲ ကော်ရှူတဲ့ချာတိတ်တွေကိုလည်းဝမ်းဗိုက်ထဲထည့်ထားရဲ့
ပွဲတော်ရက်တွေဆို DJ သီချင်းခပ်မြူးမြူးနဲ့ ခုန်ပေါက်လို့ ငြိမ့်နေတတ်သေးတယ်
လေလွင့်နေတဲ့မိဘတွေကိုလည်း ငေးကြည့်လား ၊ ငေးကြည့်ရဲ့လေ
အသံတိတ် ကြိတ်ငိုနေတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်
ရူးသလို ပေါသလိုလုပ်ပြီး ကိုယ့်နာမည်ကိုယ်မေ့နေပြန်တယ်
ပြီးတော့...အသံနက်ကြီးနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှန်းမသိ ဆဲနေပြန်ရော ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 6:05 AM No comments: Links to this post
Posted by မောင်ရေချမ်း at 2:58 AM No comments: Links to this post
နောက်ဆုံးမှာ ရှုံးပွဲတွေချည်း တွေ့ခဲ့ပေါ့
ပြောင်မြောက်တဲ့ ဂိုးများလည်း မရခဲ့ပါ
ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ပိုက်ထဲ ကိုယ်ပြန်ရှူးတဲ့ခံစစ်မှူးလေးကိုစိတ်ပျက်
ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ် အနီကတ်ပြခံရတဲ့ ကစားသမားလေးကိုစိတ်ပျက်
ငါတို့ လောင်းကြေးခုနစ်တွေ ရှုံးခဲ့ကြပေါ့
တန်းဆင်းဇုန်ထဲရောက်နေတဲ့ အသင်းကောင်းလေးဟာ ငါတို့ပါပဲ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 2:43 AM No comments: Links to this post
ကားတွေက မြှားတွေပစ်လိုက်သလို လှစ်ခနဲ၊ဝေါခနဲ
သူကိုယ်တိုင် ချမှတ်တဲ့စည်းကမ်းကို သူကိုယ်တိုင်ပြန်ချိုးဖျက်ပစ်ပုံက
" သူ့ခမျာ မီးပျက်နေရှာတယ် " ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:35 PM No comments: Links to this post
ဖျားနာ ၊ ကိုက်ခဲနေတယ်
ညနေခင်းမွှေးမွှေးလေးတစ်ခုကို အိတ်ကပ်ထဲ တယုတယထည့်ထားခဲ့ပါတယ်
အခုတော့ ပလတ်ဖောင်းပေါ်က ခိုလေးတစ်ကောင်လိုပဲ ထိတ်လန့်နေရင်း
အရင်က သောကြာတွေကို ထုတ်ထုတ် ကြည့်ဖြစ်တယ်
တကယ်တော့ ..ကိုယ့်သောကြာတွေဟာ ပျော်စရာပါ
ကိုယ့်သောကြာဟာ နှစ်ယောက်အတူတူ ဆောင်းခဲ့ဖူးတဲ့ထီးလေးတစ်လက်ဖြစ်ခဲ့
သောကြာမှာ နာကျင်စရာတွေမရှိခဲ့ပါ ၊
နားထဲမှာ ပူခြစ်သိမ်မွေ့လွန်းစွာတိမ်တွေ ပြိုပြိုလာတယ်
တကယ်တော့ ...ချစ်ခြင်းတရားဟာ အင်္ကျီအ၀ါနုရောင်ဖျော့ဖျော့လေး
တကယ်တော့ ... ချစ်ခြင်းတရားဟာ အဖြူရောင်ဒေါက်ဖိနပ်လှလှလေး
တကယ်တော့ ...ချစ်ခြင်းတရားဟာ သိမ်းထားချင့်ဖွယ် လက်မှတ်လှလှလေး
ဒီနေ့သောကြာကို တိတ်တိတ်လေး လန့်ထိတ်လို့
ကယောင်ကတမ်းဖျားနာနေမိပေါ့ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 6:41 AM No comments: Links to this post
လည်ချောင်းထဲမှာ ချွဲသလိပ်တွေနဲ့မြို့ !
အခုထိ အဲဒီံမြို့လေးဟာ အရင်တိုင်း
ဘတ်(စ်)ကားပေါ် အလုအယက်တက်လို့ နေရာကိုဦးရာလူစနစ်နဲ့မြို့
ပေါက်လွှတ်ပဲစားများရဲ့ ပေါက်ကရကတိတွေအပြည့်ကို ထမ်းပိုးထားရရှာတဲ့မြို့
အရင်အတိုင်း လူတွေ လမ်းတွေ ပျော့အိနူးဖျပ်လို့
ငါတို့ကတော့ ရေခွန်၊မြေခွန်၊ မီးခွန် အိမ်ခွန်
စသဖြင့် ရှိရှိသမျှအခွန်တွေကို မပြတ်တမ်းထမ်းဆောင်နေရတဲ့သစ္စာရှိမြို့သူမြို့သားတွေဖြစ်ရဲ့
* 124 #
၅၀၀၀ ကျပ်တန်ငွေဖြည့်ကဒ်လေးကို ၀ယ်မဖြည့်နိုင်တဲ့(၀ယ်ဖြည့်ဖို့ ရုတ်ရုတ်သဲသဲနဲ့)
နှစ်သိန်းတန် ၊ ထောင့်ငါးရာတန် ဖုန်းကဒ်တွေ ပလူပျံနေတဲ့မြို့မှာပေါ့
အဲဒီ့မှာလေ အခုထိ အရင်အတိုင်း
အခုထိ မူယာမာယာနဲ့ အပျိုမလေးရှက်သလို မျက်လွှာကို ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ချလို့
ဆန္ဒပြမှုနဲ့ ၊ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာနဲ့
အငြင်းပွားမှုနဲ့ ၊ ရုပ်မြင်အသံကြားသတင်းနဲ့
တစ်ခါတစ်ခါ ရေဒီယိုမှာ တစ်နေ့ကို (၄)ကြိမ်တောင်လာတတ်တဲ့သမ္မတမိန့်ခွန်းနဲ့
အဲဒီ့မြို့ကြီးပေါ့ ( သိပ်အငြင်းထူတာပဲကွာ )
ဟိုပင် ဒီပင်ကူးပါလို့ မျောက်ကလေးတွေ သစ်ကိုင်းလွတ်တဲ့မြို့ပေါ့
ဓားသွေးသံ တစီစီနဲ့ မြို့လေ
ထစ်ခနဲဆို ၀ှစ်ခနဲရောက်လာတဲ့ မြှားတံတွေနဲ့
လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါ၏ ဆိုတဲ့မျက်နှာဖုံးနဲ့
အဲဒီ့မြို့လေးဟာ ခေါင်းကိုက်ဖျားနာ မကြာခဏ
သွေးရူးသွေးတန်းအိပ်မက်တွေ မကြာခဏမက်လား ၊ မက်ရဲ့
တော်ပါပြီကွာ အသက်ရှူကျပ်လိုက်တာလို့ ညည်းရင်း
တကယ့် တကယ်ဆို အရင်အတိုင်းပေါ့
ချွဲ သလိပ်တွေ ကပ်နေရှာတဲ့မြို့လေ
ခပ်ဝေးဝေးမြို့တွေက မီးပွင့်မီးပွားသတင်းတွေကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်ကြတဲ့
"ဆရာမကလည်း ဘာတွေသင်မှန်းမသိဘူးကွာ ။ ကျူရှင်လည်းမသွားချင်ဘူး"
" ဒါဆိုလည်း ဂိမ်းဆိုင်ပဲ လစ်စို့ကွာ "
ဟင့်အင်း ပြောရရင်တော့ အဲဒီ့မြို့ကြီးပေါ့
အဲဒီ့ မြို့တော်ကြီးဟာ အခုထိအရင်တိုင်းနဲ့
လူတွေ လမ်းတွေ ပေတေစွာလွင့်လို့
နှင်းဆီပွင့်လေးကို ထွေးပိုက်ထားရင်း ရင်ဘတ်မှာဆူး စူးနေတဲ့မြို့ပေါ့
အဲဒီ့မြို့လေးဟာ ချွေးနံ့တထောင်းထောင်းထနေတဲ့ လူတန်းစားတွေကိုထမ်းပိုးထားရင်း
လေလွင့်မှုတွေဟာ လောက်ကောင်တွေလို တဖွားဖွားနဲ့ပေါ့
အသက်ရှူကျပ် ချွဲ သလိပ်ကပ်နေရှာတဲ့ရပ်ဝန်းဟာလေ
အဲဒီ့မြို့ကလေး ။ ။
ပဲ့တင်သံဂျာနယ် ၊ ၂၅ / ၁၂ / ၂၀၁၃
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:17 PM No comments: Links to this post
တကယ်လို့ အဲဒီ့အဖြစ်အပျက်တွေသာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အမှန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
အသံမဲ့စကားလုံးတွေကိုပဲ စိတ်ထဲမှာ တဂီးဂီးအော်မြည်
ဒါပေမဲ့ ဘာမှ မယုံကြည်ရတာ အသေအချာ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:24 AM 1 comment: Links to this post
ဂိမ်းနှိပ်ရင်တောင် ကိုယ်နိုင်မယ်ထင်ရမှ ကစားချင်ခဲ့ကြ
ဆရာမက တိုင်ပေးရင်ပျော်ရွှင်တက်ကြွစွာ အော်ကျက်ခဲ့ကြ/အော်ကျက်ခဲ့ရ
မိဘတွေဆီက တစ်လထက်တစ်လမုန့်ဖိုးပိုရဖို့သာ ကြိုးစားခဲ့ကြ
မိုးရွာရင် လမ်းပေါ်ထွက် ဘောလုံးကန်ဖို့တာစူလို့
ဖေဖေလာရင် အုန်းသီးခွဲစားမယ်ကိုပဲ အော်ဟစ်ခဲ့ကြ
တစ်ခါက ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းက..။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:02 AM No comments: Links to this post
ကြယ်လေးတစ်ပွင့်ကြွေကျသွား။ငေးစိုက်ကြည့်ရင်းကျွန်တော့်ရင်သည် လှိုက်ခနဲ။နှစ်ကာလ(လွန်ခဲ့လေသောနှစ်ကာလများ)သည် တမြေ့မြေ့ နှလုံးသားကိုတသွဲ့သွဲ့ခုတ်မောင်းတိုးဝှေ့လာသည်။
××××××××××× (၁) ××××××××××××××
( ဤအဖြစ်အပျက်ပါ အကြောင်းအရာတို့ကိုတကယ့်အဖြစ်အပျက်မဟုတ်ခဲ့သောဇာတ်လမ်းဟုမှတ်ပိုက်ယူဆပါရန် ကျွန်တော် ၀မ်းနည်းကြေကွဲစွာ လိမ်ညာမိပါသည်။)
ရုပ်ရှင်တွေ ၊ ၀တ္ထုတွေထဲကကဲ့သို့ မျက်စောင်လေးထိုး ၊ နှုတ်ခမ်းလေးမစူတစူလုပ်မည်။ထို့နောက် သူမသည် ရှက်ဝါးဝါးခပ်သော့ သော့လေးဖြင့် ခေါင်းလေးငုံ့သွားလိမ့်မည်ဟုတွေးထင်ထားသည်မှာကျွန်တော် မှားသွားခဲ့သည်။သူမသည် ကျွန်တော့်စကားကို စိတ်ဝင် တစားနားထောင်ပြီးပန်းနုရောင်နှုတ်ခမ်းလေးညွှတ်ကွေးသွားရုံမဆိုသလောက်လေးပြုံး၏။ ထို့နောက် အသံထွက်အောင်ပင် တခစ်ခစ် ရယ်မောပစ်လိုက်သည်။ ထိုရယ်သံသည် ကျွန်တော့်နှလုံးသားအိပ်မက်ကမ်းပါးကို တဝေါဝေါတိုက်ခတ်သွားသောရေလှိုင်းများပမာ။ မျက် ၀န်းနက်နက်တို့သည် တဖိတ်ဖိတ်တောက်လုပင် အရောင်လဲ့ကာ။
“ချစ်တယ် … ။ချစ်တယ်တဲ့လားကွာ။ ဒါလေးပြောဖို့များ နာရီဝက်လောက် ငြိမ်နေရသေးတယ်။ နင် .. ဒီလိုစကားပြောမယ်ဆိုတာသိသားပဲ။ ခစ်…ခစ် ..ခွိ”
သူမရယ်သံက ကျွန်တော့်နားစည်ထဲတွင် မျောက်တစ်ကောင်အော်သံလိုပင် မည်သို့မှကဗျာဆန်မနေပါ။ နှစ်ယောက်ထိုင်တန်းလျားလေး ၏အစွန်းတစ်ဖက်ကိုဆတ်ခနဲသူမရွေ့ထိုင်လိုက်သည်။ ပထမ ကျွန်တော်ကြောင်အမ်းအမ်းဖြစ်သွားသည်။ သူမရယ်သံကြောင့် ကျွန်တော့်မျက်နှာ ထူအမ်းလာသလိုခံစားရသည်။ပြုံးယောင်ယောင်ဖျော့ဖျော့ မျက်နှာထားကိုငေးကြည့်နေမိ။
လေတစ်ချက် ဝေ့ခနဲ၊သုတ်ခနဲ တိုက်သောကြောင့် မြေနီလမ်းလေးပေါ်မှ မြေမှုန်နုနုတချို့ တနွဲ့နွဲ့ခုန်ကကြ၏။ ၀ါကျင့်ကျင့် သစ်ရွက်တချို့ သုတ်ခနဲကြွေသက်လျောကုန်လာခဲ့။ သူမမျက်နှာကိုရဲရဲမကြည့်ရဲသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သက်မဲ့အရာများကိုအဓိပ္ပာယ် မဲ့မျက်ဝန်းဖြင့် ၀ိုးတ၀ါးငေးကြည့်နေမိ။ ခစ်ခနဲတိုးလျလျ ရယ်သံပါးပါး။အို…မြေပြိုသလား ၊ တော်လဲသလား၊ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ၀ုန်းဒိုင်း ကြဲပန်းနုနုတွေပွင့်ကုန်။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 4:07 AM No comments: Links to this post
ဖြစ်သမျှ အကြောင်းစုံ ဟာ နားအေးပါအေး
ဒူဝေေ၀ မြည်သံတွေကြားထဲမှာ ဝေလေလေ
အခုတစ်ပတ် တနင်္ဂနွေမှ နောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေတိုင်အောင် ဝေလေလေ
ရုပ်မြင်သံကြား ဂျီးဂျီးဂျစ်ဂျစ်ကြားထဲမှာ ဝေလေလေ
မရယ်ရတဲ့ပြက်လုံးတချို့ကိုနားထောင်ဖို့ ရေဒီယိုလေးဖွင့်ပါစို့လေ
ကိုယ်တို့အားလုံး ဝေလေလေ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 7:35 AM No comments: Links to this post
ညဟာ အမှောင်မှာ တိတ်တိတ်လေးနဲ့
လန့်…….ထိတ် ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 6:37 AM No comments: Links to this post
တစ်မျှင်ချင်း စိတ်ကို နွှာစားနေတယ်
ဒလိမ့်ခေါက်ကွေး အတွေးဟာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်နေတယ်
၂၀၁၅ မှာ ငါတို့ ဘာဖြစ်မယ်
အခု ငါတို့ ဘာဖြစ်တယ်
ကျနော့်ညရဲ့ ၀တ်မှုန်နုနုလေးဟာ ဖြုတ်ခနဲကြွေကျသွားတယ်
၁၉၆၂-၂၀၁၅ အလေအလွင့်ခုနစ်တွေဟာ သက္ကရာဇ်ထဲပြိုဆင်း(လည်စင်း) လို့နေတယ်
ထိတ်လန့်ဖွယ်နေမ၀င်အင်ပါဟာကြီးဟာ မျက်ဝါးထင်ထင်ကိုယ်ထင်ပြလို့နေတယ်။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:29 PM No comments: Links to this post
၂၀၁၃ ဇူလိုင်လကို ခြစ်ပစ်လိုက်တော့ အောက်ပါအတိုင်း
မြန်မာ_တရုတ် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းမှ ဓာတ်ငွေ့များ
ရွှေထည်ပစ္စည်များ လုယူသူသုံးဦးကို လေးနာရီအတွင်း ဖမ်းမိ
(ဘာညာ သာရကာ) ထိရောက်စွာ အရေးယူဖြစ်ကြောင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြောကြား
[ ဦးပတေးဆိုသည်မှာ စာရေးဆရာမင်းလူ၏၀တ္ထုတစ်ပုဒ်တွင် ဗယာကြော်ရောင်းသူဖြစ်ကြောင်း ]
အစိုးရနယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသော နေအိမ်များရွှေ့ပြောင်းခိုင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးလိပ်အလိပ်ရေသန်း (၇၀၀၀ )ကျော် သုံးစွဲ
မိုးရေချိန် အလုံအလောက်မရရှိခြင်းကြောင့် တောင်သူများအခက်ကြုံ (စာ _ ၁၃ သို့ )
တူ ၊ တံစဉ် လူထုနှင့် တန်ဖိုးနည်း ဒီမိုကရေစီ
မိမိသည် ဒါရိုက်တာ အလိုကျ သရုပ်ဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း
[ ဘောလိဝုဒ် သရုပ်ဆောင် ကရီနာကပူးရ်ပြောကြား ]
မြ၀တီတွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ သောင်တင်နေခြင်းမှာ
အီဂျစ်ပြည်တွင် ဆန္ဒပြသူများမှ သမ္မတမော်စီ နုတ်ထွက်ပေးရေး တောင်းဆိုစဉ်
ဟတ်ချိုး_ ဆိတ်ဖွား ၊ ပဲကြီးလှော်ဒီမိုကရေစီ နှင့်
နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများ ၊ Facebook , social network စသဖြင့်နှင့်
စသည်များသည် စသဖြင့် အီစီကလီ/ တ၀ီဝီမြည်နေခြင်း ။ ။
[ ၀န်ခံချက်။ ။ အထက်ပါစာသားများမှ အများစုသည် 1.7.2013 , ထုတ် Weekly Eleven ဂျာနယ်ပါစာသားများနှင့်
၃.၇. ၂၀၁၃ ထုတ် Daily Eleven သတင်းစာပါ စာသားများဖြစ်ကြောင်း ]
ပျော်စရာ ရွှင်စရာ နာကျင်စရာ
"ဟေ့ ..ဒီမယ် ဒီမယ်
ကိုယ့်လူတို့ အခမ်းနားဆုံးအိပ်မက်ဆိုတာ ဒါပဲ"
"ဟေ့ ...ဒီမယ် ဒီမယ်
ကိုယ့်လူတို့ ခင်ဗျားတို့နေချင်တဲ့အိမ်ဆိုတာ ဒါပဲ"
"ဟေ့ .. ဒီမယ် ဒီမယ်
ကိုယ့်လူတို့ စိန်ရောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက် အနာဂတ်ဟာ
ဘယ်လို ဟိုလို ဒီလို "
အက ကတော့ ချိုမိုင်မိုင်နဲ့ ငါတို့တကယ်တွေ့ခဲ့ကြပြီ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:37 PM 1 comment: Links to this post
ပုံမှန်တစ်ခွက်ဆိုတဲ့ အသံကိုက ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး
ငါတို့ဟာ မြို့ပြလူသားတွေအဖြစ် စီးမျော
“ သက်ရှိသက်မဲ့ ဒြပ်ရှိ ဒြပ်မဲ့တို့၏ အမည်ဟူသမျှကို နာမ်ဟုခေါ်သည်”
ရပ်ကွက်လေးရဲ့ဗွက်ထလမ်းကျဉ်း ၁၀ ပေအိမ်ခန်းလေးထဲမှာ ကလေးတွေရဲ့စာအော်ကျက်သံနဲ့ဆူဝေလို့နေ
မြို့ပြဟာ အသက်ရှူမ၀တဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ်အဘိုးအိုလို
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မယုံကြည်ရတဲ့အနေအထားမှာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲလွန့်လူးလို့
အဲဒီ့မြို့ကြီးမှာ အခုထိ ရန်မကုန်သေးဘူး .. သူငယ်ချင်း
မင်း မ လာချင်ပါနဲ့
စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေတွေ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်
အောက်စီဂျင်မလိုဘူး ၊ ပုလင်းမချိတ်ဘူး
ကိုယ့်ကိုယ် ကို စောင့်ရှောက်နေရသူတွေမှာ
ငါတို့မနက်ဖြန်တွေနဲ့စာရင် သီချင်းအတုပဲ သူငယ်ချင်း
အင်တာနက်ခေတ်မှာ သိုလှောင်စရာ နေရာ ခပ်များများမလိုဘူး
ငါတို့တောင် ကျောတစ်ခင်းစာ သက္ကရာဇ်တွေနဲ့ ပွန်းပဲ့နေတာကြာခဲ့ပေါ့
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:03 AM No comments: Links to this post
ကဗျာ ဘာညာဘာညာနဲ့ ပေါက်လွှတ်ပဲစား ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှော သက္ကရာဇ်များ
တရားတွေ တရားမ၀င် ၊ တရားမ၀င်ကဗျာတွေ ခိုးဝင် သက်ဆိုင်ရာမှ လက်ပိုက်ခြေမြှောက်ကြည့်နေ
ကဗျာပဋိပက္ခမှ ကဗျာအရေးအခင်းဖြစ်ပွား ၊ မီးရှို့ ကဗျာသတ်ဖြစ်စဉ် အစရှိသဖြင့် ဆန္ဒပြ (တားမြစ် ထိန်းချုပ်ရေး)
အဆောက်အအုံလေးလုံးနှင့် ကဗျာနှစ်ငါးဆယ်စာ သေဆုံးခဲ့
ကဗျာအပုပ် ငါးဆယ်(အပုပ်အပွကဗျာ) များ လူစုလူဝေးကြားတွင် ပေါက်ကွဲနိုင်သဖြင့် အများပြည်သူပူးပေါင်းကူညီရန်လိုအပ်
လက်နက်မကိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဤခရီးလမ်းကိုလျှောက်ရန်ဟု လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်အုပ်စုမှပြောကြား
ကဗျာသေ နှစ်ဆယ့်ငါးပုဒ်ကို လွှဲပြောင်းယူရန် ငြင်းဆို
ကဗျာသေ နှစ်ဆယ့်ငါးပုဒ်ကို သံတမန်နည်းအရသာ ဆောင်ရွက်လို
ကဗျာတွေစိမ့်ဝင်လာ / ခိုးဝင်လာ / မြို့ပေါ်မှာ ရွာထဲမှာ ရပ်ကွက်ထဲမှာ
တချို့အဝေးပြေးကားစီးလာ ၊ တချို့ လေယာဉ်ပျံစီးလာ
တချို့ သဘောင်္စီးလာ ၊ တချို့ခပ်တည်တည် ခြံစည်းရိုးကျော်ဝင် လမ်းလျှောက်လာ
တချို့ တိုက်ပုံဝတ်နဲ့ ၊ တချို့ သင်္ကန်းဝတ်နဲ့
တချို့ ကောအရှည်နဲ့ ၊ တချို့အလန်းဇယားနဲ့
အလွဲသုံးစား ကလေးစိတ်မကုန်သေးတဲ့ လူကြီးအထာ ခိုင်မာတဲ့သတင်းရပ်ကွက်မှ တိတိကျကျ
စကားလုံးအီပျော့ပျော့များ သက်/သတ်ဆိုင်ရာမှ ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးနေ
ကဗျာအိုကြီးအိုမ ၊ ကဗျာဂျိုကျိုး နားရွတ်ပဲ့ ၊ ကဗျာမျောက်လောင်းများ ၊ ကဗျာဖလန်းဖလန်းလေးများ
ပေါက်လွှတ်ပဲစား ကတိပုံပြင် တော်ကီတွင် ကဗျာအားလုံး ၀မ်းနည်းကြေကွဲ
နောက်မကြာမီ ထုဆစ်တော့မည့် ပန်းပုရုပ်ဟာ ကဗျာသူ ကဗျာသားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြု/မပြု
စကားလုံးများအားလုံး စိတ်ဝင်တစား ခေါင်းချင်းဆိုင် /ခွက်ချင်းတေ့
ကဗျာအနှစ်သာရ(အရသာ) ရွှေရည်စိမ် ဟုတ်/မဟုတ်
ပိန်မသာလိပ်မသာ ၊ ဒါ မသာမယာခုနစ်တွေအတိုင်း ။
June . 2013 New Style Magazine
Posted by မောင်ရေချမ်း at 4:01 AM 1 comment: Links to this post
သူ့အမှားတွေမှာ ချစ်စရာကောင်းလောက်အောင် အမှန်တရားတွေပေပွေလို့
ပေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို စာစီကုံးပါ
"ကျွန်မတို့ မိသားစု" တဲ့
သူ့စာလုံးပေါင်းတွေ အမှားမှား အယွင်းယွင်းနဲ့
တစ်... စ ... စီ .. လွင့် .... ကျဲ
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:45 AM 1 comment: Links to this post
နာနာကျင်ကျင် အော်ဟစ် ၊
ရုပ်ကြမ်းကြီးနဲ့ အလွမ်းသီချင်းကိုအော်ဆိုခဲ့ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 6:10 AM 1 comment: Links to this post
လူကုန်ကူးမှုနဲ့ ၊ လူသတ်မှုနဲ့
နိုင်ရာစား ရတာယူ အလေ့ကျအဓမ္မတွေ ရှင်သန်ရာမြို့
အဲဒီ့မြို့ကို ရှာတော့ အဲသလိုတွေ့တယ်
အဲဒီ့မြို့ကိုပဲ ဒီကလူတွေဟာ အမှောင်ထဲကနေ ငေးလို့ပေါ့ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 3:25 AM 1 comment: Links to this post
တချို့ ခေတ်ကို ပုခုံးပေါ်တင်ပြီးရုန်းခဲ့ကြ
တချို့ ခေတ်ကို အိပ်မက်အသစ်တွေဝတ်ပေးခဲ့ကြ
လွမ်းရသူတို့က ကြယ်ဖြူရောင်ခြေရာတွေ ချန်ခဲ့
တချို့ခြေရာတွေ မေ့မရ ခဲ့ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 10:00 PM 1 comment: Links to this post
နာကျင်မှုဟာ ဘယ်တော့မှ အလကားမရခဲ့ဘူး ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:33 AM No comments: Links to this post
ရွှေငါးလေးတွေနဲ့ ၊ ရေတံခွန်စိမ်းစိမ်းလေးတွေနဲ့
တိုက်လာတဲ့လေပြည်မှာ စံပယ်ရနံ့လေးတွေနဲ့ ဆွတ်ဆွတ်မွှေးလို့
ပျော်စရာ ရွှင်စရာ ။
ကျီကျီကျာကျာ ငှက်ကလေးတွေရဲ့အသံဟာ ချိုနေမယ်
ကိုယ်ဟာ လျှောက်လို့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို လေချွန်နေမယ်
ပျော်စရာ ရွှင်စရာ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:27 AM No comments: Links to this post
စစ် ( ၂)
ဒေါသတွေ အာ..အာ လာ
" အိမ်ပြန်ချင်တယ် ... မေမေ "
" .............. ...."
" ကျနော့်ညီလေးကို ပြန်ရှာပေးကြပါ "
"စစ်တိုက်တမ်းဆို မကစားချင်ဘူး မကြားချင်ဘူး"
မိသားစုရှာတမ်းကစားနည်းကို မျက်ရည်စက်လက်ကစားကြတယ်။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 8:19 AM No comments: Links to this post
လူဆန်ဆန် စက်ရုပ်ကောင်ဟာ စကားလုံးတွေနဲ့ ပိပြားနေရင်း ကိုယ့်အိပ်မက်ကိုခေတ်ထဲ ဆွဲခြစ်/ဆွဲနှစ် ပစ်ခဲ့ !
စက်ရုပ်ကောင်ဟာ ရှုနာရှိုက်ကုန်း/သေးကွေးပိန်ချုန်း/ အသံမထွက်တဲ့ပါးစပ်ပေါက်သေးသေးလေးနဲ့
နာကျင်မှုတွေကို တစ်ခါတစ်ခါ စိတ်လိုလက်ရ ညည်းညူလို့
အဲသလိုနဲ့ စက်ရုပ်ကောင်ဟာ နှလုံးတုတစ်ခုကိုမောင်းနှင်လို့
စက်ရုပ်ကောင် ဟာ ဆဲဖို့ဆိုဖို့ ၀န်လေး
ကြောက်လန့်မှုစိတ်တွေ/အကြောက်တရားတွေ ကြီးစိုးရာအရပ်မှာ ..
ကမ္ဘာကြီးကို ပုခုံးပေါ်တင်ရင်း နှလုံးတုက တချက်ချက်မြည်
စက်ရုပ်ကောင်မှာ ည ညဆို အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါနဲ့
စက်ရုပ်ကောင်ဟာ ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကိုယ်ပြန်ဖိလို့ မောနေရှာတယ်
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:23 PM No comments: Links to this post
ရင်တွေအောင့်တာ ညညဆိုအိပ်မရခဲ့ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 1:12 PM No comments: Links to this post
ပန်းအတု လူအတုတွေကို ဆွဲဖွင့်/ဆဲပစ် !
မျက်နှာမသစ်တဲ့ကောင်ရယ် ၊ ချဉ်တူးတူးအနံ့နဲ့လူရယ်
ကိုယ်ထိုင်နေတဲ့ စားပွဲနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာ လက်ဖက်ရည်အတုတစ်ခွက်မှာသောက်
သူ မလောင်းထားတဲ့ဘောလုံးပွဲအကြောင်းကိုပဲ ရေးကြီးခွင်ကျယ်
ရက်ပါ ဦးခေါင်းကို ပြောင်းပြန်ဆောင်းထားတဲ့ငနဲကလဲ အသံသိပ်ကျယ်တယ်
သတင်းစာဟာ ကိုယ့်စားပွဲပေါ်တည့်တည့်မှ ဘုတ်ခနဲ
" ဒီသီချင်းခွေလေး ဖွင့်ပေးပါဦး "
" ဒီနေ့မနက် ___ မှာ ___ ဖြစ်လို့တဲ့"
" ဟိတ်လူ သွားပြီလား ။ လက်ဖက်ရည်သောက်သွားဦးလေ"
ချိုချွဲချွဲအသံတွေ ။ အသံတွေ ။
ကိုယ့်ရှေ့က ကော်ဖီခွက်လေးဟာ ငေး..မော ..တိတ် ဆိတ်
လူအတုတွေ တဖွဲဖွဲ ၊ စကားအတုတွေ တဖွေးဖွေး
အဲဒီ့မနက်ခင်းမှာ မျက်နှာနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်သစ်ခဲ့ရပေါ့ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:56 PM No comments: Links to this post
ဘယ်လို အရူးအနှမ်းတွေများ ရွာချလိုက်တဲ့မိုးလဲ
ဝေါခနဲ ၊ ၀ုန်းခနဲ
ပြတ်သွားတဲ့ ခြေထောက်တစ်ဖက်ဟာ နာကျင်ကဗျာ
ပြတ်သွားတဲ့ လက်တစ်ဖက်ဟာ နာကျင်ကဗျာ
သွေးစ/သွေးနတွေကို ဒီကဗျာထဲ ပစ်ထည့်လိုက်တယ်
စစ်ခနဲ ၊ ကျင်ခနဲ
ဘော်စတွန်မှာ သရဲသဘက်တွေ ပျော်မြူးစွာအောင်ပွဲခံကြ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:02 PM No comments: Links to this post
နောက်တစ်နှစ် တက်ရမယ့်အတန်းကို ဘယ်တော့မှ မော်မကြည့်ခဲ့
မနက် မနက် ကျောင်းမတက်ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွေးက အဆင်သင့်
ကျောင်းစာအုပ်တွေကို ၀ဲပစ် ( ၀ဲ .... ပစ် )
P.S2ဂိမ်းဆိုင်လေးထဲ တိုးဝှေ့လို့
ငယ်ငယ်က သမိုင်းဖတ်စာအုပ်ထဲက ဘုရင့်နောင်ကိုလဲအားကျ
ခေတ်တစ်ခေတ်လုံးကို ဘောလုံးတစ်လုံးလို လိမ့်နေအောင်ကန်ခဲ့ကြ
ကျောင်းက ရန်ပွဲတွေဆိုလည်း ၀င်နွှဲချင်ခဲ့
ခုတော့ ဘာမှ မဖြစ်ချင်တော့ဘဲ
နာကျင်စရာ သီချင်းတွေဆို ကျော်ပစ်လိုက်တယ် ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:33 AM No comments: Links to this post
လူမိုက် က ကိုယ်ရှေ့မှာ သက်သက်လွတ်စားပြတယ်
ဒါ ရယ်စရာလို့မမြင်မိဘူးကွယ် ။
" ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျည်ဆံပစ်ခွင့်မရတဲ့သေနတ်တွေပါ "
တောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ စိတ်မပါလက်မပါ တအံတသြ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:51 PM No comments: Links to this post
ငါ့ဆံပင်စတွေ လူးလွန့်နွဲ့ခက် ။
ဘယ်အချိန်တည်းကများ နောက်ညိုခဲ့သလဲ နှုတ်ခမ်းကိုက်စဉ်းစားမိ
ခေတ်ထဲ ခပ်ရဲရဲခုန်ဝင်တိုးဝှေ့နေတဲ့ ပုသိမ်စုံတွဲလေးတွေ
ငါ့ရင်ထဲမှာ အေးမြ/လှပတဲ့ ဂီတတစ်ပုဒ်စီးဝင်သွား
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်.. ဒီညနေခင်းကို ဆွဲဆန့်
ငါ့နှုတ်ခမ်းဝမှာ တေ့လို့မော့သောက်ပစ်ချင်ရဲ့ ။
ငါ့ကို ခပ်ပေါပေါဧည့်ရိပ်သာတစ်ခုထဲ ခေါက်ချသွားခဲ့ပေါ့ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 7:46 AM No comments: Links to this post
စကားသိပ်မပြောတဲ့ ငပိန်းကောင်အကြောင်းဟာ အထိတ်တလန့်ဖြစ်ရပ်တွေမပါဝင်ဘူး
ငပိန်းတစ်ကောင်ရဲ့လေတိုက်သံကို ဘယ်သူကများခံနိုင်မလဲ ဟုတ်တယ်အသေအချာပဲ
၁ ။ အသံဟောင်ဖွာဖွာနှင့်စကားပြောတတ်ခြင်း
၂။ ကတုံးကို ပြောင်နေအောင်တုံးထားခြင်း
၄။မဆဲတတ်/မဆိုတတ်ြခင်း ( ယဉ်ကျေးလိမ္မာ ၊ လူကြီးလူကောင်းဟန်တိုက်ပုံကိုအမြဲဝတ်တတ်)
၆။ အတင်းပြောပါက တိုးတိတ်ညင်သာစွာပြောဆိုတတ်ခြင်း
ကဗျာအတုမြို့ထဲ ၀င်လာပါက သူငယ်စဉ်ကကြည့်ထားသော ပါဝါရိန်းဂျားများကဲ့သို့စွမ်းစွမ်းတမံကာကွယ်တတ်
သူ့တွင် ပိုင်ဆိုင်သည်မှာ မိန်းမတစ်ယောက်ယူရန်ပင် မလောက်ငသောငွေကြေးအချို့
ဂျင်းဘောင်းဘီအစုတ် ၃ ထည်နှင့် စာအုပ်များဖြင့်ပြည့်နေသော၄၀၀၀ တန်ဘေးလွတ်အိတ်တစ်လုံးသာ
ဤသည်ကိုပင် ငပိန်းကောင်က ကြံဖန်ဂုဏ်ယူလျက်
သူသည် ညဘက်အိပ်စက်ရန်ပျင်းရိတတ်ပြီး နေ့စဉ်လမ်းဘေးဆေးဆိုင်မှဆေးအတိုအထွာများမှီဝဲ
ငပိန်းကောင်ကိုတွေ့နိုင်သော နေရာများမှာ (အတိအကျအားဖြင့်မဟုတ်သော်လည်း)အောက်ပါအတိုင်း
၁။ လမ်းဘေးတစ်နေရာ ရာ
သူက အိပ်မက်အ၀ါရောင်ကို ၀တ်ဆင်ထားသောလူသတ္တ၀ါဟုခေါ်နိုင်ရုံမျောက်သာသာအမွှေးအမျှင်များပြားသူဖြစ်
ငပိန်းကောင်သည် ငပိန်းကောင်စစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်း မည်သည့်ထောက်ခံချက်မှမလိုအပ်ဘဲမြင်ရုံဖြင့်သိနိူင်
ငပိန်းကောင်တွင် အိမ်မရှိ/မနက်စာလက်ဖက်ရည်သောက်ရန် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကောင်းကောင်းမရှိ
အိမ်ထောင်မရှိ(လက်ရှိလူပျို) ငပိန်းအမှတ်စဉ်မှာ ၂၁၆ ဖြစ်ကြောင်း
ထိုကဲ့သို့ ငပိန်းကောင်အား အရေးတယူစိတ်ဝင်စားလျက် နိုင်ငံတကာမှမှာကြားခေါ်ယူနေကြောင်းပင်ဖြစ်သည်။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:46 AM No comments: Links to this post
ဇူကာဘာ့ခ်နယ်မြေက ဒိန်းဂျားတွေ များတယ် - နောက် ကလုန်း တွေလည်း များတယ် စိတ်ညစ်ရတယ်
Zuckerberg ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်း/မတင်ကြောင်းပြောချင်စိတ်ရှိရင်မိတ်ဆွေ like သို့မဟုတ် share
အလွန်ရှုပ်ထွေးလွန်းတဲ့ စွန့်ပစ်အမှိုက်ပုံကြီးလား N0(or) Yes တခုခုရွေးချယ်
သင့်fashion သင်ရှာဖွေပြီးဆို like သို့မဟုတ် share
ကိုယ်နေဟန်ထားကဘယ်လို ၊ တခါက ကလစ်မိတယ် _အလန်းလွန် အလွန်လန်းသူများဆိုတဲ့ပေ့ကိုရောက်သွား လစ်ခနဲပြန်ခိုးထွက် / မလုံ့တလုံ့Modelမလေးရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ ကျနော့်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကျွတ်ကျန်ခဲ့
Search for people,places and things / [………] / ကလစ်တစ်ချက်မှာသေနတ်သံတွေပါလားမလား
ကိုယ့်ဒုက္ခတွေ သူများကို လိုက်Tag ! ယူပေးပါ ကျနော့်အပူတွေ
Notes ထဲမှာ ကဗျာတွေလက်စမသတ်ရသေး
သူတို့ဘယ်လို Notes တွေကိုချက်ပြုတ်မလဲ ကျနော် စိတ်ဝင်စားပြန်တယ်၊
ဆဲခံရပေါ့တစ်ခါ ။လူကြီးလူကောင်းတွေ ဒီနယ်မြေမှာ ဘယ်လို account တစ်ခုယူထားမလဲ
ဟလို _ ဇူကာဘာ့ခ် ခင်ဗျား မသိချင်ချင်/သိချင်ချင် ကျနော်တော့သိပ်စိတ်ဝင်စားမိသွားပြန်ပြီ
လူငယ်ပီပီ Chat မယ်/ ချစ်မယ်ပဲ၊ ခြစ်မယ် ၊ပစ် မလုပ်ရင်ပြီးရော ကွာ သူငယ်ချင်း
Chat box ထဲရောက်လာတဲ့ စာသားဖွဲ့စည်းပုံမှာအောက်ပါအတိုင်း
[သယ်ချင်းရေ Photo Contest မှာ ၀င်ပြိုင်ထားလို့ပါ အပန်းမကြီးရင်Like လေးတစ်ချက်နိပ်ပေးပါလား ]
ဇူကာဘာ့ခ် ရေ - ခင်ဗျားနယ်မြေထဲမှာ ကျနော် ရိုးသားစွာပျော်ဝင်ခဲ့ပါပြီ/တစ်နေ့တာဟာအပြစ်တင်ဆဲဆို
[ ဟိတ်ကောင် ! မင်းကဗျာတွေက ပေါတောတောတွေ ၊ ကဗျာဆရာဆိုတာ ကလေက၀နဲ့ ကဗျာဆရာအမည်မခံသင့်ဘူး]
ဟုတ်ကဲ့ __ ကျနော် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောလို့ရရင်ပြောချင်ပါတယ်၊
ခေတ်ကြီးကို/က ထမ်းထားရတာလေးလို့ ကဗျာဆေးလေး ထိုးမိပါတယ် ။
ဒီမြေပေါ်မှာ ကျားဆိုးတွေပေါ/မပေါထက် ကဗျာဆိုးတွေ ပေါ/မပေါကိုကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်းရှာဖွေနေပါတယ်
တဆိတ်လောက် wqdavmu ကူ ညီပါ ဦး ဗျာ unDygOAsm* ကီးဘုတ်ပေါ်စမ်းစမ်းနဲ့ ကြာလာရင်ချိနဲ့သွားမှာစိုးရ / စားသောက်/သွား/လာ/စက်ဖွင့် www.facebook.com ကိုရိုက်ထည့်လိုက် Notifications တွေမှာ သွေးနံ့ရရင်ကမန်းကတမ်း/(က)ယောင်(က)တမ်း/(ကတုန်ကယင်)ခပ်ရဲရဲမကလစ်နိုင် ၊ဖွ/ဖွင့် ချလိုက်ပြန် ၊ဟိုကောင်လေးနဲ့ဟိုကောင်မလေးဟိုဟာဖြစ်တာ သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်တဲ့ခေတ် !ဟင် ! [ ဟာ] ( ဟယ် ) Commentတွေ မထိတ်သာမလန့်သာ ၊
Mg Yay Chan is now friends with zuckerberg , clone army and Other people
Zuckerberg ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်း/မတင်ကြောင်းပြောချင်စိတ်ရှိရင်မိတ်ဆွေ like သို့မဟုတ် share ။ ။
[ ၀န်ခံချက်။ ။ သူငယ်ချင်း/အကို/ ကဗျာဆရာရွှေကိုယ်နတ်(UCSM) ၏ စာသားအား
ကဗျာခေါင်းစဉ်အဖြစ် တလေးတစား(ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ) ယူငင်သုံးစွဲပါသည်။ ]
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:39 PM No comments: Links to this post
ခေါင်းစဉ်ကို ရိုးရိုးလေးတပ်လိုက်တယ် မြန်မာပြည် တဲ့
ဒဏ်ရာ ရထားတဲ့ ရထားတစ်စင်းပါပဲ
ပန်းပွင့်တွေ တစ်ပွင့်ချင်းပွင့် ပွင့်လာတယ်
" ကျွန်မယောင်္ကျား ပြန်မလာတာ သုံးနှစ်ရှိပြီ "
" ဘာမှ မဖြစ်ချင်ဘူး လိုချင်တာ ...... "
ကောင်းကင်မှာ ၀ဲပျံနေတဲ့ စုတ်ဖွားဖွားငှက်တွေ
အသံများ ၊ အားလုံးရဲ့ နားမှာ လျှံကျ
" ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်ကွာ "
" ဆန်တစ်ပြည်ဖိုး မရှိလို့ လူရင်းလိုက်ရတာ ကျွန်မနာမည်ရိုစီ "
သတင်းတွေ ဖတ်ပြီး အသက်ရှူမ၀ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 3:28 AM No comments: Links to this post
ကျည်ဆံတစ်တောင့် ၊ ပန်းတစ်ပွင့်
မျက်ရည်တစ်စက် ၊ အပြာရောင်အင်္ကျီတစ်ထည်
သင်.. ဘာတွေကို တွေး/ရွေးမလဲ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 7:55 AM No comments: Links to this post
ငါ...တို့....အော်သံတွေ...ဟာ လည်ချောင်းဝ မှာတင် တစ်....ဆို့....ပျောက်...ကွယ်
" ငါတို့သည် ဤမှောင်မိုက်သောလောက၏ အုပ်စိုးရှင်များနှင့်လည်းကောင်း
( ဧဖက် ၆း၁၂ )
လှိုင်းလုံးတွေကြား အားလုံးဟာ ဒရွတ်တိုက်မျောပါ
အသားလိုပေမဲ့ အရိုးလောက်ပဲ တောင်းခဲ့ကြတဲ့ ငါတို့
အခုတော့ ပြောစရာတွေ ဘယ်မလဲ
နာနာကျင်ကျင် အိပ်မက်တွေပါပဲ/နှင်းဆီတွေ တစ်ပွင့်တစ်ပွင့်လွင့်
ကဗျာဆရာတိုင်းဟာ ခေတ်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ကောင်းမွေ ဆိုးမွေ
အားလုံးUpdate သိနေတာ ကောင်းမယ်ထင်တယ် (ShweKo NatUcsm)ဆဲချင်ဆိုချင်စိတ်တွေအတွက် အခုလောလောဆယ် အငမ်းမရ
ကျနော် ၀ါးစားပစ်တယ် / သတင်းတွေကို ၀ါးစားပစ်တယ်
ကိုရွှေကိုယ်ရေ... ဒါဟာလဲ တကယ့်ကို Danger ပဲ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 7:41 AM No comments: Links to this post
မိုးသံ လေသံတွေ ကြားတဲ့အခါ ကျနော်ဟာသမ်းဝေလိုက်တယ်
ခေတ်တွေက စားတယ်/လူတွေက စားတယ်
အကြီးကြီးက အသေးလေးတွေကို စားတယ်
အော်/အေး/ ပြောပါ သူငယ်ချင်း / အေးအေးဆေးဆေး နားအေးပါးအေး
ခင်ဗျားပြောတော့ အာရုံပါပဲဆို ! ( @ # & ! )
ဟိုပစ္စည်း ဒီပစ္စည်းတွေ သုံးတဲ့အကြောင်း
ဟိုကောင်မလေး ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ဖလန်းဖလန်းတတ်တဲ့အကြောင်း
ပြောတော့လည်း ပြောတာပါပဲ တရုတ်ပစ္စည်းတွေ ကျနော်မသုံးတဲ့အကြောင်း
ဟိတ်လူ..... ခင်ဗျားတစ်ယောက်တည်း ခပ်ပေါပေါဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း
ဟိုဟာကို ဒီလို ဟိုလို ဒီလိုလုပ် ...
ခင်ဗျားအော်လိုက်တဲ့ ပါးစပ်ပေါက်လေးမှာ ဒီ .. ဒီ ..ဒီ ဆိုတဲ့စာလုံးတွေအနံ့ပျင်းနေတဲ့အကြောင်း
တကယ်ပါပဲ ။ တော်တော်တော့ ရယ်စရာပဲ
ကျနော်တို့ အားလုံးဟာ မနက်မနက် ရောက်လာမယ့်သတင်းစာတွေကို ငြင်းငွေ့တဲ့အကြောင်း
ခင်ဗျား စိတ်ပါရင် facebook ဆိုတဲ့အရှုပ်ပုံကြီးပုံ တက်ဆဲလို့ရတဲ့အကြောင်း
ပေါက်ကရ အဖြစ်အပျက်တွေ ပေါက်လွှတ်ဗလပွာ/ပေါက်ပေါက်ဖောက်သလို
ဒါနဲ့..မေးရဦးမယ် ခင်ဗျားမျက်မှန်လေး ဘယ်ဈေးပေးဝယ်ခဲ့ရလဲ
ကျနော် ကတော့ ပြောပြီးပြီပဲ
ခင်ဗျားတစ်ယောက်တည်း ခပ်ရှုပ်ရှုပ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:27 AM 1 comment: Links to this post
မွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့ ၀တ်မှုန်နုနုတွေ ။ ။
( 27/3/2013 )
Posted by မောင်ရေချမ်း at 4:05 PM No comments: Links to this post
စိမ်းစိမ်းလန်းလန်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကမ္ဘာ
ကိုယ်ဟာ စစ်ပွဲတွေ သတင်းကြားရင်
ပန်းနဲ့ပေါက်တိုင်းပဲ ကစားကြတာပေါ့ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:11 PM 1 comment: Links to this post
ခုထိ အနည်မကျသေးတဲ့ဒဏ်ရာပါးပါးတွေကို မျိုချရင်း
ဘ၀ ဟာ ... မီးပျက် ၊ ရေမလာ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 7:19 AM 1 comment: Links to this post
လွင့်ထွက်သွား ၊ ပျံဝဲ
အားလုံးဟာ ကောလဟာလတွေ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:48 PM No comments: Links to this post
မြို့တွေ တမြို့ပြီးတမြို့ ခုန်ကူးလို့ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:47 PM No comments: Links to this post
ကိုယ်ဟာ အခုတော့ တခုတ်တရလွမ်းနေရ
Posted by မောင်ရေချမ်း at 2:40 AM No comments: Links to this post
ပေါင်တံဖြူဖြူတွေ လွင့်လို့ ၊ ၀ဲလို့
သူစိမ်းတွေဟာ တို့အနုပညာမြို့ကြီးကို ဗြောင်ခိုးသွား
ကိုယ်ဟာ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို အာခေါင်ကနေအန်ထုတ်တယ်
ကျုံးထဲက ရေတွေ ခပ်ထုတ်ပြီး ကဗျာတွေတစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ်
နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်ရင်ဝ ကိုယ်ပြန်တူးပြီး အော်ဟစ်ပစ်မိ
မန္တလေးသားတွေ ထဟေ့ ထ ...။
မြန်မာပြည်သားတွေ ထဟေ့ ထ ..။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 8:47 PM No comments: Links to this post
ဘာတွေလဲ ၊ စစ်တွေဖြစ်ဖြစ် ၊ (အချစ်တွေဖြစ်ဖြစ်)
တစ်ည တစ်ည ...ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကဗျာရေးရမှာ
ကြာတော့လည်း သမ်းဝေမိတယ် ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 11:08 PM No comments: Links to this post
မန္တလေးညတွေ (၁)
တဂျွတ်ဂျွတ် ၊ တဂျိန်းဂျိန်းနဲ့ တိမ်တွေ
မန္တလေးကတော့ အိပ်မောကျလို့ ။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 12:53 PM No comments: Links to this post
ကျနော့် စိတ်ဟာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ဒရွတ်ဆွဲ
Dental ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကို ဖြစ်ခွင့်ကိုလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလို့
ကဗျာတစ်ပုဒ် ငါစိတ်ဟာ ပေါက်ခွဲပစ်ရ
ဖြားယောင်းသွေးဆောင်မှု ၊ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းမှု
အမျိုးဂုဏ်ဇာတိဂုဏ်မေ့လျော့စေမှု ၊ အယုံသွင်းမှု
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ၊ အသားစားကြူးမှု
living together များအားမွေးမြူရှင်သန်ကြိုဆိုမှ
ဆေးမှု ၊ မုဒိန်းမှု ၊ ခိုးဆိုးလုယက်ဓါးပြတိုက်မှု ၊
ဇာတ်တူသားစားမှုမယားငယ်မှု ၊ လင်ငယ်မှု ၊
အသင်းဂိုဏ်းဂန များဖွဲ့ ၍ အတ္တချင်းစီးချင်းထိုးစေမှု
ငါ အမုန်းဆုံး မြို့။ ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 9:35 AM No comments: Links to this post
ဟေ့ ကိုယ်လူ့ ..... ခင်ဗျား ပါးစပ်ပေါက်ကြီးကို ပလာစ...
အခု ငါတို့ဟာ ရေခဲရိုက်ထားတဲ့ အပုပ်အသိုး ဒီ...ဒီ......
ကြယ်တွေ ... ကြယ်တွေ .. ၊ သူတို့ဟာ သတ္တိရှိတဲ့ကြယ်တေ...
ကိုယ့်ကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ခပ်ခပ်သောက်သွားတဲ့ သောကြာတေ...
နံရံကို ပြေးပြေးဆောင့်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ လူငယ်ညနေတွေ !...
ငါတို့ဟာ လူငယ် ၊ ပြီးတော့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ကြယ်တွေ...
တကယ်လို့ အဲဒီ့အဖြစ်အပျက်တွေသာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်...
ကဗျာ ဘာညာဘာညာနဲ့ ပေါက်လွှတ်ပဲစား ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှော ...
လူဆန်ဆန် စက်ရုပ်ကောင်ဟာ စကားလုံးတွေနဲ့ ပိပြားနေရင်...
စကားသိပ်မပြောတဲ့ ငပိန်းကောင်အကြောင်းဟာ အထိတ်တလန့်ြ...
ဇူကာဘာ့ခ်နယ်မြေက ဒိန်းဂျားတွေ များတယ် - နောက် ကလုန...
ခေါင်းစဉ်ကို ရိုးရိုးလေးတပ်လိုက်တယ် မြန်မာပြည် တဲ့...
ငါ...တို့....အော်သံတွေ...ဟာ လည်ချောင်းဝ မှာတင် တစ်...